सुष्माले नेपालबारे अन्तिमपटक के भनेकी थिईन ? (भिडियोसहित) – Himshikharnews.com
सुष्माले नेपालबारे अन्तिमपटक के भनेकी थिईन ? (भिडियोसहित)
२३ श्रावण २०७६, बिहीबार १६:३०
काठमाडौं । भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदुत दिपकुमार उपाध्यायले भारतीय पूर्व विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको निधनले नेपालले एउटा असल मित्र गुमाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । स्वराजले जहिलेपनि नेपाल–भारत द्धिपक्षीय सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ र यसबारेमा सोच्नुपर्छ भनेर भन्ने गरेको पनि उनले स्मरण गराए ।
बुधबार राति प्राईम प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ मा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पूर्वराजदुत उपाध्यायले यस्तो खुलासा गरेका हुन् । स्वराज अत्यन्तै सरल र नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्छ भनेर लागिपर्ने नेता भएकोले उनको कामको सदैव प्रशंसा र सम्झना भैरहनेपनि उनले बताए ।
नेपालमा संविधान जारी गर्दा ताका भएको नाकामा भएको आर्थिक अवरोध खुलाउनको लागि पनि स्वराजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उपाध्यायले सम्झिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल आर्थिक रुपमा समृद्ध भएको हेर्न चाहेको पनि उनले विश्वास दिलाए । नेपाल–भारत द्धिपक्षीय सम्बन्धमा देखिएका सबैखाले समस्याहरु अब समाधान हुनेपनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाललाई अत्यन्तै नजिकबाट बुझेका सुव्रमन्यम जयशंकर विदेशमन्त्री बनेकोले उनले अहिले विद्यमान रहेका सबैखाले समस्याहरु हल गर्नसक्ने उनको विश्वास छ । रिपोर्टसनेपाल डटकमबाट